Ny takelaka fitaterana ABF dia tsy misy tahiry intsony, ary manitatra ny fahafaha-mamokatra ny orinasa - PCB Prototype, Fabrication, Factory, mpamatsy, mpanamboatra
» Blog » Ny takelaka fitaterana ABF dia tsy misy tahiry intsony, ary manitatra ny fahafaha-mamokatra ny orinasa
Ny takelaka fitaterana ABF dia tsy misy tahiry intsony, ary manitatra ny fahafaha-mamokatra ny orinasa
Miaraka amin’ny fitomboan’ny 5g, AI ary ny tsenan’ny informatika avo lenta, nipoaka ny fangatahana mpitatitra IC, indrindra ireo mpitatitra ABF. Na izany aza, noho ny fahaizan’ny mpamatsy vola mifandraika amin’izany, tsy ampy ny famatsiana ireo mpitatitra ABF ary mitombo hatrany ny vidiny. Manantena ny indostria fa mety hitohy hatramin’ny 2023 ny olan’ny famatsiana henjana ny takelaka fitaterana ABF. Amin’ity sehatra ity, zavamaniry lehibe efatra manisy takelaka lehibe ao Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo ary Zhending, no nandefa ny drafitra fanitarana ny takelaka ABF tamin’ity taona ity, miaraka amin’ny fandaniam-bola tanteraka mitentina 65 tapitrisa tapitrisa dolara mahery amin’ny zavamaniry tanibe sy Taiwan. Ho fanampin’izany, ny ibiden sy shinko any Japon, ny motera Samsung South Korea ary ny elektronika Dade dia nanitatra ny fampiasam-bolany tamin’ny takelaka mpitatitra ABF.
Niakatra be ny fangatahana sy ny vidin’ny biraon’ny mpitatitra ABF, ary mety hitohy hatramin’ny 2023 ny tsy fahampiana
Ny substrate IC dia novolavolaina tamin’ny alàlan’ny tabilao HDI (board circuit interconnection avo lenta), izay manana ny mampiavaka azy, avo lenta, miniaturisation ary manify. Amin’ny maha fitaovana mpanelanelana mampifandray ny puce sy ny circuit board amin’ny fizotry ny fonosana puce, ny laharam-pahamehan’ny ABF carrier board dia ny fanaovana fifandraisana ambony sy haingam-pandeha mifangaro haingam-pandeha miaraka amin’ilay puce, ary avy eo mifandray amin’ny tabilao PCB lehibe amin’ny alàlan’ny tsipika maro kokoa eo amin’ny solaitrabe mitondra ny IC, izay misy ifandraisany, mba hiarovana ny fahamendrehan’ny fizaran-tany, hampihena ny famoahana, amboary ny toeran’ny tsipika Mahatonga ny fiparitahan’ny hafanana tsaratsara kokoa hiarovana ny puce, ary hampiditra ny passif sy ny activité aza. fitaovana hahatratrarana asan’ny rafitra sasany.
Amin’izao fotoana izao, eo amin’ny sehatry ny fonosana avo lenta, ny mpitatitra IC dia nanjary ampahany tena ilaina amin’ny fonosana puce. Mampiseho ny angon-drakitra fa amin’izao fotoana izao, ny tahan’ny mpitatitra IC amin’ny vidin’ny fonosana amin’ny ankapobeny dia nahatratra 40%.
Anisan’ireo mpitatitra IC, misy indrindra ireo mpitatitra ABF (Ajinomoto manangana sarimihetsika) sy ireo mpitatitra BT arakaraka ny làlana teknika samihafa toa ny rafitra resin CLL.
Anisan’ireny, ny tabilao fitaterana ABF dia ampiasaina amin’ny chip computing avo toa ny CPU, GPU, FPGA ary ASIC. Aorian’ny famokarana ireo sombin-kazo ireo dia mazàna fonosina ao amin’ny tabilaon’ny mpitatitra ABF alohan’ny hamoriana azy ireo amin’ny tabilao PCB lehibe kokoa. Raha vantany vao lany ny mpitatitra ABF, ny mpanamboatra lehibe anisan’izany ny Intel sy ny AMD dia tsy afa-miala amin’ny lahatra fa tsy afaka halefa ilay puce. Hita ny maha-zava-dehibe ny mpitatitra ABF.
Hatramin’ny tapany faharoa tamin’ny taon-dasa, noho ny fitomboan’ny 5g, ny computing cloud AI, ny mpizara ary ny tsena hafa dia nitombo be ny fangatahana chip computing computing (HPC) avo lenta. Miaraka amin’ny fitomboan’ny fangatahana tsena ho an’ny birao / fialamboly, fiara ary tsena hafa, ny fangatahana CPU, GPU ary AI chips eo amin’ny sisin’ny terminal dia nitombo be, izay nanosika ihany koa ny fangatahana ireo birao mpitatitra ABF.